Mogok Media: ရင်ခုန်သံအတုအယောင် (သို့) အခိုးခံရတဲ့ ပို့စ်ကလေး
ရင်ခုန်သံအတုအယောင် (သို့) အခိုးခံရတဲ့ ပို့စ်ကလေး
ကိုယ့်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ မွန်းကျပ်နေတာတွေ၊ အစိုင်အခဲ ဖြစ်နေတာတွေကို ရင်ထဲမှာ မဆန့်တော့လို့ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲက ပွင့်အံပြီး ထွက်လာခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဆောင်းဦးသက်သေ၊ အလွမ်းနေကြာရိုင်း၊ ပတ္တမြားတိုင်းပြည် လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အက်ဆေးလေးတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့မိပါတယ်။
အဲဒီ အက်ဆေးလေးကိုပဲ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ တိတ်တခိုးလေး ကူးယူဖော်ပြထားတာကို ဖတ်လိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ ဒီသတင်းကို ကြားကြားချင်း ကျနော် အရမ်းကို ပျော်သွားမိပါတယ်။ အခုလို အသိအမှတ် ပြုခံရတဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို အားတက်သွားမိတာပေါ့။ ပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ဘယ်ဂျာနယ်များ ဖြစ်လိမ့်မလဲ ဆိုတာကိုပါ သိချင်စိတ်စောနေမိတယ်လေ…။
အခုခေတ် လူတွေ အများဆုံး ဖတ်နေကြတဲ့ ဆေးရောင်စိုစို၊ ဒီဇိုင်းလှလှ၊ စာရွက်ချောချော၊ အရွယ်ခန့်ခန့် Weekly Eleven တို့လို့ The Myanmar Times တို့လို ဂျာနယ်တွေထဲဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ထဲ မဆီမဆိုင် ဆုတောင်းနေမိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ထင်သလို မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော့်အက်ဆေးလေးကို မန္တလေးအခြေစိုက် ထုတ်ဝေနေတဲ့ နန်းမြင့် ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်ထဲမှာ နန်းဆန်ဆန်၊ မန်းဆန်ဆန် အိနြေ္ဒကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ တွေ့လိုက်ရတယ်လေ။
ဒီ စပါယ်ရှယ်နန်းမြင့် ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်ကြီးကို လိုက်ရှာဝယ်ရတာကလည်း အမောသား…။ ပထမဆုံးဝင်ပြီး မေးမိတဲ့ဆိုင်က နန်းမြင့်ဂျာနယ် မတင်ဘူး လို့ မဆိုင်းမတွ ဖြေပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဒီ နန်းမြင့်ဂျာနယ်ကြီးကို ဆိုင်တိုင်း မတင်ရကောင်းလား ဆိုပြီးတော့တောင် ဒေါသထွက်နေမိလိုက်သေးတယ်။ နောက်တစ်ဆိုင် မေးပြန်တဲ့အခါမှာလည်း ဆိုင်ရှင်က ကျနော့်ကို အသက်မပြည့်သေးပဲနဲ့ ညစ်ညမ်းစာပေတွေဖတ်တဲ့ ကောင်ကလေးများလား ဆိုပြီး စူးစမ်းတဲ့အကြည့်နဲ့ မျက်မှောင်ကုပ်ကာ ကြည့်ရင်း ကုန်ပြီ လို့ ၀တ်ကျေတန်းကျေ ပြောပါတယ်။ ပထမဆိုင်ထက်စာရင်တော့ ဒီဆိုင်ကလူ ဖြေတာကို ပိုကျေနပ်မိပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်း အရင်ဆိုင်ထက်စာရင် ဒီဆိုင်တော့ ပိုပြီး အဆင့်ရှိလိမ့်မယ် လို့လည်း ခံစားလိုက်ရတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ဆိုင် ရောက်တော့မှပဲ နန်းမြင့်ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်ကြီးကို ပက်ပင်း သွားတွေ့ပါတော့တယ်။ တစ်ဆိုင်တည်းသော ဆိုင်မှာ တစ်စောင်တည်းသာ တင်ထားတဲ့ ဂျာနယ်တော်ကြီးပါတကား…။ ကျနော်လည်း ဘာမှ တွေဝေမနေတော့ပဲ တခြားသူတွေ ၀ယ်သွားမှာကို စိုးရိမ်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ရော၊ နောက်ထပ် နန်းမြင့်ဂျာနယ် တင်တဲ့ ဆိုင်ကို ထပ်ရှာဖို့ ခြေကုန်လက်ပမ်း ကျနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရော ကမန်းကတမ်း ၀ယ်ချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ တန်ဖိုးက လေးရာကျပ် ပါ…။
နောက်တော့ ဒီ စပါယ်ရှယ် နန်းမြင့်ဂျာနယ်ကြီးကို ကြံ့ဖွံ့အသင်းကြီးက ဦးစီးထုတ်ဝေတာလို့ သိရပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ စေတနာတွေကို အများပြည်သူတွေ သိရှိနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထုတ်ဝေတာ ဖြစ်မယ်။ ဂျာနယ်အရောင်က မွဲခြောက်ခြောက်ကြီးပေမယ့် အတွင်းက စာလုံးပေါင်းတွေက တော်တော်များများ မှန်တာ တွေ့ရတယ်။ ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးမှာတော့ အင်ဂျင်အဟောင်းတွေကို ရေဆေးသန့်စင်ပြီး တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပေပါပြားဘော်ဒီနဲ့ စက်မှုဇုံထုတ် ဂျစ်ကားတစ်စင်းကိုပဲ တွေ့ရတယ်။ မင်းသမီးပုံ လှလှလေးများ ပါလေမလားလို့ ရှာကြည့်တော့လည်း မတွေ့မိပြန်ဘူး။ မိန်းမကို စိတ်နာနေကြတဲ့ သူတွေများ စုပြီး စီစဉ်နေကြသလား ဆိုတာ စိတ်ထဲ သံသယ၀င်မိသေးတယ်။ ပြီးတော့ တောင်ရေး မြောက်ရေး ရေးထားတာဆိုတော့ အပတ်စဉ် ပုံမှန်လေးထွက်ဖို့ အပန်းကြီးလှမယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး။
ကျနော်တို့ပို့စ်ကို ကော်ပီလုပ်ပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ ကလောင်ရှင်နာမည်က သာကီနွယ် တဲ့။ လူကြီးလူကောင်း ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ သာကီနွယ် ဆိုတာ မြင့်မြတ်တဲ့ အမျိုးအနွယ် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ် မဟုတ်လား။ သူ ဒီလို ကော်ပီ လုပ်ထားတာကိုလည်း လိပ်ပြာသန့်ပုံ ရပါတယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုယူပြီး ဘယ်သို့ ကိုးကားတယ်ဆိုတာလေးတောင် ထည့်မထားပုံထောက်ရင် ကျနော်တို့တွေ စေတနာ ရက်ရက်ရောရော ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကို ကြိုသိပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ပို့စ်ကလေးကို ကလောင်နာမည် ပြောင်းလိုက်တာကလွှဲပြီး ဘာမှ ပြုပြင်မနေတော့ပဲ ၏၊ သည် ... မရွေး ဖော်ပြထားတာပေါ့။ ဒီအတွက် ကျနော်တို့က စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ၀မ်းတောင် သာသေးတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ…။ တကယ်ဆိုရင် ကော်ပီလုပ်တယ်ဆိုတာ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်နဲ့ မူရင်းအရသာ မပျက်စေဖို့ အဓိက အကျဆုံးပဲ မဟုတ်လား။ မူရင်း အင်္ဂလိပ်သီချင်းမှာ နားထောင်တဲ့သူကို လွမ်းဆွေးနေစေပြီး၊ ဗမာလို ပြန်ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ နားထောင်ရတာ ပျော်စရာ ကောင်းနေတယ်ဆိုရင် သိပ်မနိပ်ပေဘူးပေါ့။ ဒီနေရာမှာတော့ သာကီနွယ် ကိုချီးကျူးရမှာပါ။ မူရင်း အရသာမပျက်စေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်တာက မူရင်း ဗမာလိုရေးထားတာကို ဗမာလို ပြန်ဖော်ပြထားတာလေး တစ်ခုပဲ ပြောစရာ ရှိတာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ…။ ကျနော်တို့ကတော့ နန်းမြင့် ဂျာနယ်ကိုရော၊ သာကီနွယ် ကိုပါ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပေါ်လစီကိုက ကျနော်တို့ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို လူတွေသိလေ ပိုကောင်းလေ လို့ ကျနော်တို့က ခံယူထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ ဒီအတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ ဘလော့မှာ အမှတ်တရအဖြစ် မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်…။
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 4:35 PM
မင်တွေ စက္ကူတွေ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခတွေ အကုန်ခံပြီး ခုလို မူရင်းမပျက် ၏ သည် မလွဲ ပြန်ကူးပြီး ဖြန့်ဝေ ပေးတဲ့ အတွက် နန်းမြင့် ဂျာနယ်ကို ကျေးဇူးပါ.. အဓိက က လူတွေ များများ ဖတ်မိစေချင်တာ ဆိုတော့ ခုလို ဖြန့်ပေးတော့ ပရင့်ထုတ်ပြီး ဝေရ သက်သာတာပေါ့နော့.. အင်း အင်တာနက် ပေါ်က မီဒီယာ ဥပဒေ အတွက် အမှု ရှာနေ ပါတယ် ဆိုတဲ့ လူကြီးမင်းများ ခုလိုကျတော့ Copy Right ဆိုတာကို နှာစေး နေသလား မြင်ကို မမြင်မိသလား မသိဘူးနော်..
အဲ့လောက်ကြီးမပြောကြပါနဲ့ဗျာ။ ခေါင်းစဉ်မတူပါဘူးဗျ။ တော်တော်စဉ်းစားပြီး ပြန်တပ်ထားတာဖြစ်မယ်။ ဟားဟား
" ဤဘလော့ဂ်တွင် ရေးသားထားသော စာများ၊ ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများကို စီးပွားရေးနှင့် နှီးနွယ် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းနေရာများ၊ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်းများ၌် အသုံးပြုလိုပါက ခွင့်ပြုချက်ကြိုတင်တောင်းခံစေလိုပါသည်။ "
sorry , sorry ဖတ်ရင်းနဲ့ အောက်ရောက်သွားလို့
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိလိုက်တော့ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။ ကြိုးစားအားထုတ်ရေးတဲ့လူ ဘယ်လို ခံစားရမလဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ငါတို့ နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်မလုပ်လို့ ပြဿနာ တတ်နေပါလားဆိုတဲ့ ပြယုဂ်ကို ပိုပြီး ထင်ရှားစေပါတယ်။ အရည်အချင်း မရှိတဲ့ လူတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေသုံးပြီး အမျိုးမျိုး သောနည်းတွေနဲံ့ ပြည်သူတွေကို စော်ကားနေတာပါပဲ။
copy right ဆိုတာ နားမလည်၊ စာလည်း မရေးတတ်၊ စာမတတ် ပေမတတ်တဲ့ ကြံဖွတ်တွေက ဂျာနယ် ထုတ်မှတော့ အဲဒါတွေ ဖြစ်တာ မဆန်းပါဘူး။ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးတောင် ဒီလို နားမလည်တဲ့ ကောင်တွေ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေသေးတာပဲ။
ကျွန်တော်တို့ ဒီဒုက္ခတွေ အေးဖို့ကတော့ ဒီ မတန်မရာ တတ်ကိုက်တဲ့ ခွေးတွေကို မောင်းထုတ်မှ ရမယ်။ (ခွေးတွေနဲ့ အခုလို နှိုင်းပြောတဲ့အတွက် ခွေးတွေက ကျွန်တော့်ကို သူတို့နဲ့ နှိုင်းရကောင်းလား၊ ခွေး သိက္ခာ ကျတယ်လို့ စွပ်ဆွဲရင်လည်း ... ခွေးတွေ စွပ်စွဲမယ်ဆို မလွန်ပါဘူး ခင်ဗျာ။)
so disgusting ! they should ask permission and they should give credit to you.
who are the publishers-sue them!
အကိုရေ ကျွန်တော်လည်း ဘလောခ့်မှာထည့်ထားတဲ့ © ဆိုတာလေး ပြန်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ။ ဒီနိုင်ငံမှာ အသုံးမှမ၀င်ပဲကိုးဗျ။ =D
Forgiving is the best good and positive attitude, it make you better an happierperson.
God knows the truth. Keep it up.
No forgiveness for these plagiarizers!
မြန်မာပြည်ကလူတွေဟာ အတုခိုးတာခိုးချတာကို ခွင့်လွတ်နေရင်ဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။
သီချင်းရေးဆရာတွေ ရက်တွေ ဟဲဗီးတွေလဲ ခိုးကူးတွေ
ဓါတ်ပုံဆရာတွေလဲ သူများပုံကို မိမိပုံပြောပြီး ပိုစတာထုတ်တယ်။
နာမည်နဲ့ တောင် သိတယ်။
အခြေခံကိုမပြင်ရင် တိုင်းပြည် တိုးတက်မှုမရှိပါ။
စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျနော်လဲ အကိုတို့ အမတို့ အကြောင်းဖတ်ရကထဲက ကျနော့ပို့ စ်တွေကို အကုန်မလွှတ်ဘဲ ထိန်းသင့်ပြီလို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်၊
မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာက ဒီနိုင်ငံရဲ့ ပုပ်သိုးနေတဲ့ ပုဒ်မတွေထဲမှာ ပြဌာန်းမထားသေးဘူးထင်ပါတယ်လေ။
အဲဒီတော့ ရဲဘော် ဒီဘ၀မှာ ဒီလိုပဲ အနိုင်ကျင့် ခံပေဦးတော့
အင်တာနက် ပေါ်က မီဒီယာ ဥပဒေ အတွက် အမှု ရှာနေ ပါတယ် ဆိုတဲ့ လူကြီးမင်းများ ခုလိုကျတော့ Copy Right ဆိုတာကို နှာစေး နေသလား မြင်ကို မမြင်မိသလားဆိုတဲ့ ခွန်မြလှိုင်အမေးအတွက်ကလဲ မေးနဲ့ မောမယ်လို့ပဲ ပြောမယ် အဟက်ဟက်
Anyway, I salute your this good post to have been copied exactly but title. Cheers, bro, keep it up. Don't keep it in your mind at all.
အရွှန်းဖောက်ပြီးရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ စာရေးဆရာကိုလည်း ချီးကျူးပါရဲ့
စိတ်ထဲမှာ ဘာမှဖြစ်မနေပါနဲ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဆောင်းပါးကို ခိုးကူးတဲ့သူကို ဝေဖန်အပြစ်မတင်ခင်မှာ ကိုယ်တိုင်ကရော သူခိုးတစ်ယောက်များ ဖြစ်နေသလားဆိုတာ တွေးကြည့်ပါဦး။ သင်ဟာ မြန်မာဗီဒီယိုခွေတွေကို မူရင်းအတိုင်းဝယ်ယူကြည့်ရှုအားပေးပါရဲ့လား။ မြန်မာ သီချင်းတွေကိုရော မူရင်းခွေကို ၀ယ်ယူအားပေးပါရဲ့လား။ မြန်မာစာအုပ်တွေကို စာအုပ်ဆိုင်ကနေ ၀ယ်ယူအားပေးပါရဲ့လား။ သင်လည်းပဲ အခြားသူများနည်းတူ အွန်လိုင်းကနေ download လုပ်လုပ်ပြီး ခိုးကူးခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ သူတပါးပစ္စည်းခိုးခဲ့သော သင်သည် အဘယ်ကြောင့် သင့်ပစ္စည်းကို ခိုးခံရချိန်တွင် ခလေးတစ်ယောက်လို ငိုကြွေးနေပါသလဲ။
Hnin Wai said...